Fetin'ny ririnina - Torolàlana nohavaozina 2018 | Hetsika, Torolàlana amin'ny lalao, Legiona | WoW Guides | WoW Guides
Fetin'ny ririnina - Torolàlana nohavaozina 2018
Adriel Diaz | | Events, Game Guide, Legiona
Hey tsara! Manao ahoana daholo? Manantena izahay fa tsara fitondran-tena ianareo tamin'ity taona ity satria tonga ny Fetin'ny Ririnina ary… feno fanomezana! Amin'ity toro-lalana ity dia holazainay aminao ny zava-baovao amin'ity taona ity sy izay hijanona ho simba foana. Ary tsy misy hatak'andro intsony, modia mody ♪ ... Ny tiako holazaina dia ... nougat!
1 Fetin'ny ririnina
2 Inona no vaovao amin'ny taona 2018
3 Fanovana sy fampiharana 2017
4 Asa fitoriana Citadel
5 Entana Fetibe ririnina bebe kokoa
6 asa fitoriana
8 Andro fanomezana
Ny Fetin'ny Fetin'ny Ririnina dia hetsika Krismasy tokana ao amin'ny World of Warcraft. Ity hetsika ity dia ahafahantsika mankalaza azy io amin'ny fanandramana sakafo maro, amin'ny fanaovana ady totohondry sy amin'ny fahazoana ny fanomezana. Ity hetsika ity dia maharitra 18 andro, manomboka ny 16 desambra 2017 ka hatramin'ny 2 janoary 2018. Mandritra ity hetsika Fetibe amin'ny Fetibe Ririnina ity dia afaka manao iraka araka ny hetsika ny mpilalao toa ny fanampiana amin'ny famonjena. Afangaro ny reindeer ary miady Tsofy ny maharikoriko. Toy ny isan-taona, ny 25 desambra dia hosokafana eo akaikin'ny hazo lehibe ao anatin'ny tanàna any Orgrimmar na Ironforge ny fanomezam-pahasoavana azontsika, ary mahazo zavatra manokana amin'ity hetsika ity. Ho fanampin'izay, hisy andiana zava-bita ihany koa izay ho azontsika tanterahina hahazoana ny lohateny Reveler ho valisoa.
Inona no vaovao amin'ny taona 2018
Ho an'ity taona vaovao 2018 ity, kilalao vaovao telo no nampiana:
Hearthstone an'i Dadabe Winter: azo raisina ho valisoa amin'ny fanomezana rehetra.
Akanjo fiadiana kilalao (Horde) / Akanjo fiadiana kilalao (Alliance). Ireo kilalao roa ireo dia misy kosmetika roa, aroloha ary kapa.
Fanovana sy fampiharana 2017
Toy ny isan-taona dia ampiana zavatra sy iraka vaovao (ankoatry ny hafa) ka misy hatrany ny vaovao ao amin'ilay hetsika:
Kilalao vaovao roa no nampiana Hearthstation (Alliance) / Hearthstation (Horde) amin'ilay efa misy Fanomezana Fetibe amin'ny ririnina.
Kilalao roa hafa no nampiana Toy Gun Set (Alliance) /Toy Gun Set (Horde) izay azo alaina amin'ny famitana ny zava-bita Aza milalao izany ao an-trano.
Nanampy biby fiompy vaovao Snowball Yeti izay azo samborina (Respawn amin'ny 30 minitra) ary afaka hitantsika ao anaty domba misy ny lanezy izy:
Ny velaran'ny oram-panala dia ho any amin'ny faritra maro any Azeroth: Orgrimmar, Ironforge y dalaran.
Nampiana entana vaovao Fanomezana mamirapiratra hatramin'ny filatsahan'ny efa misy Fanomezana nangalarina.
Ny haavon'ny entana ao amin'ny Hazo fety amin'ny ririnina kely ho an'ny 880.
Nampiana Satroka mena haute couture hatramin'ny filatsahan'ny andian-jiolahim-boto sasany toa ny Kross (Fahavalo) / saprish do Seza fiandrianan'ny Triumvirate / Varimatra de Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra.
Asa fitoriana Citadel
Miaraka amin'ity hetsika ity dia irina misiôna maro izay ho hita ao amin'ny tranoben'i Draenor. Hanome loka ireto iraka ireto Vatsy feno fifaliana azo atakalo izany pizzle o almie handravahana ny tranonao amin'ny haingo Krismasy (mitovy amin'ny Halloween):
Masiaka: hanome anao 2Vatsy feno fifaliana.
Ilay loza mahatsiravina: hanome anao 1 Vatsy feno fifaliana y 5 Snowball mahery setra.
Fanomezana maharikoriko re izany!: hanome anao 1 Vatsy feno fifaliana.
Aiza ireo ankizy?: hanome anao 1 Vatsy feno fifaliana.
5 ny vidiny Vatsy feno fifaliana ny tsirairay amin'izy ireo ary ho ireto manaraka ireto:
Boaty firavaka taloha
Baolina misy jiro misavoritaka
Na izany aza, mamporisika anao aho hampiasa ny enta-mavesatra 5 hividianana a Fanomezana bibidia satria azonao atao ireto manaraka ireto:
Amin'ny maha loharano azy Kristaly Apexis, menaka, Harena Citadel (Heveriko fa tsy ampiasainao ireo)
Ho an'ny mpanaraka anao Fitaovam-piadiana mahery fo, Legion Medalyon (angamba ... ny valizy)
Ny fanahintsika dia hifantoka amin'ilay tendrombohitra azo azo Grumpus Minion.
Entana Fetibe ririnina bebe kokoa
Na dia mandray an-tsaina ireo vaovao nampiana aza dia afaka mahazo zavatra avy amin'ny taona lasa ihany koa Fanomezana nangalarina izany dia azo raisina amin'ny iraka Midika inona izany! (Alliance) / Midika inona izany! (Horde) izay ahafahanao mahazo kilalao sy zavatra isan-karazany ankoatry ny hafa na dia misy aza ny sasany amin'izy ireo dia azo amin'ny fomba hafa:
Akanjo Fetibe amin'ny ririnina azo ampiasaina
Kodiarana hazo mena
Saribakoly manga manga kely
Saribakoly mena maitso kely
Fanaraha-maso fiara milomano shredder
Controller fiara mihazakazaka shredder
Mini Zeppelin Controller
Cushion maitso misy sisiny
Horonam-boky momba ny tantara
Robot rocket-rivotra manga-up
Robot balafomanga miakatra rivotra
Boaty mpanampy lo
-Famaritana ho an'ny fitaovam-piadiana
Ilona: Zioga amin'ny ririnina
Illusion: Afon'ny Ragnaros
Hazo fety amin'ny ririnina kely
-Ny zavatra hafa
Gorila fihinana kilalao
Mpihazakazaka varahina mavesatra
Taratasy Zeppelin taratasy
Mpanera varahina azo itokisana
Mpihazakazaka varahina lasantsy
Basy vita amin'ny rivotra Conamsy
Salady hena sy voankazo Graccu
Afaka mahazo mpanampy kely roa koa ianao amin'ny alàlan'ny fanokafana ireto zavatra manaraka ireto:
Boaty mpanampy mena -> Winter's Little Helper
Vata maitso mpanampy -> Mpanampy an'i Mompera Winter
Atolory amin'ny fonosana am-pifaliana -> Akanjo Snowman / Tinkerbell falifaly
Toy ny tamin'ny taona lasa, misy bandleaders sasany mandatsaka satroka krismasy, ankoatry ny manampy vaovao amin'ny efa misy. Ankehitriny tsy hanana fialan-tsiny ianao raha tsy amin'ny lamaody farany indrindra!
Illysanna Ravencrest en Keep Black Rook - Haute Couture Hat Festive Green
King Deepbeard en Mason'i Azshara - Haute Couture Hat Festive Green
Satroboninahitry ny afo Talixae en Lapan'ny kintana - Satroka mena haute couture
Kross ao amin'ny Fahavalo - Satroka mena haute couture
saprish ao amin'ny Seza fiandrianan'ny Triumvirate - Satroka mena haute couture
Varimatra en Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra - Haute Couture Hat Festive Green
Ilay mpivaro-kena en avo-mitsangàna - Satroka ririnina maintso
Soulbinder Nyami en Auchindoun - Satroka ririnina maintso
Oshir en Seranana vy - Satroka ririnina maintso
Gug'rokk en Mitrandraka Bloodmaul - Satroka ririnina mena
Commander Tharbek en Fihaonana an-tampon'ny Blackrock ambony - Satroka ririnina mena
Iron Reaver en Citile Hellfire - Satroka ririnina mena
Tirana Velhari en Citile Hellfire - Satroka ririnina maintso
Beast Lord Darmac en Blackrock Foundry - Satroka ririnina maintso
Flame Controller Ka'graz en Blackrock Foundry - Satroka ririnina mena
Jeneraly Nazgrim en Fahirano ny Orgrimmar - Satroka ririnina mena
Galakras en Fahirano ny Orgrimmar - Satroka ririnina maintso
Corla, Herald ny takariva in Caverns Blackrock - Satroka ririnina mena
Azil Mpisoronabe in Ny vato ifotony - Satroka ririnina mena
Admiral Rip Grunt in Ny harena ankibon'ny fahafatesana - Satroka ririnina mena
Shadowburner Drahga in Batol maloto - Satroka ririnina maintso
Lord godfrey in Darkfang Castle - Satroka ririnina maintso
Jedoga Shadowseeker en Ahn'kahet: Ilay Fanjakana taloha - Satroka ririnina mena
Magic Lord Urom en Ny Oculus - Satroka ririnina maintso
Grand Mage Telestra en Ny nexus - Satroka ririnina mena
Afaka mamboly sy manamboatra fomba fahandro vitsivitsy ianao, mandritra ity hetsika ity, ho an'ireto asa manaraka ireto:
Fitaovana hoditra: Lamina: Akanjo maintso maitso (Horde) / Lamina: Akanjo Ririnina Mena (Alliance)
Fivarotana mpanjaitra : Lamina: baoty ririnina
lakozia : Resipeo: soma paoma mafana
Ny fomba fahandro sasany dia azo raisina ihany koa ho toy ny entana Present izay mahatonga ny Tic-Tac y Smokywood Pasture Fanomezana manokana:
hilaza izao: Formula: fitaovam-piadiana manintona - mety ho an'ny ririnina
Blacksmithing: Volavola: sisin'ny ririnina
Fitaovana hoditra: Modely: fonon-tànana nataon'i Father Winter
Fivarotana mpanjaitra : Lamina: T-shirt Festive Green
simia: Resipeo: Elixir an'ny hery fanala
Engineering: Skema: Snow Lord 9000
Hahita ny iraka rehetra any amin'ny tanàna lehibe ianao (Orgrimmar o Ironforge).
Tonga eto i Dadabe Winter! o Tonga eto i Dadabe Winter!
manomboka: Kaymard Copperclick o Macey Calderilla
Nifarana: Dadabe Ririnina o Dadabe Ririnina
Raiso ny fikatsahana ao amin'ny faritra varotra Smokywood Pastures any amin'ny tanàna lehibe any Horde na Alliance (afa-tsy i Darnassus), ireo mpilalao Horde dia manolotra izany amin'ny Dadabe Ririnina de Orgrimmar, ireo an'ny fiarahamonina ao amin'ny Dadabe Ririnina de Ironforge. Manome anao ny iraka vaovao izy ireo:
Fitsaboana amin'ny ririnina raibe o Fitsaboana amin'ny ririnina raibe
Manomboka sy mifarana: Dadabe Ririnina o Dadabe Ririnina
Ampy izay ny mahandro (1), Resipeo: cookie mofomamy de Cookie mofomamy (Penney Cobblero Fanovana Wulmort) - Mitondrà mofomamy misy mofo 5 ary Ronono mangatsiaka (azonao atao ny mividy azy ao amin'ny Ronono mangatsiaka). Hahazo valisoa ianao Boaty fanomezana pasture Smokywood izay misy Boaty fanomezana pasture Smokywood.
Midika inona izany!
manomboka: Snowman hafahafa
Nifarana: Kaymard Copperclick o Fanovana Wulmort
Avereno ny Mamy nangalarina ary afaho i Metzen the Reindeer rehefa resy Rancun Romper, izay miery eo akaikin'ny Narrow Cavern eo amin'ny Hillsbrad Foothills. Taona maro lasa izay, ny grinch dia nanana spwan 5 min, rehefa miova ho iraka isan'andro dia hanana fomba hafa spawn. Fanomezana nangalarina ary manantena aho fa hiditra ao a Vato arintany miantso ny Burujo! .Rehefa mahazo ny Mamy nangalarina, hahazo ny iraka ianao:
Misaotra anao avy amin'ny Smokywood Pastures o Misaotra anao avy amin'ny Smokywood Pastures
manomboka: Kaymard Copperclick o Fanovana Wulmort
Miresaka fotsiny amin'ny Raiamandreninao Lehibe ary mitaky ny anao Smokywood Pastures fanomezana manokana, ao anaty no ahitanao fomba fahandro amin'ny vanim-potoana:
Resipeo: Elixir an'ny hery fanala (Alchemy)
Volavola: sisin'ny ririnina (Smithy)
Formula: fitaovam-piadiana manintona - mety ho an'ny ririnina (Enchantment)
Skema: Snow Lord 9000 (Injeniera)
Modely: fonon-tànana nataon'i Father Winter (Fitaovana hoditra)
Lamina: Akanjo maintso maitso (Fivarotana haza)
Ny fanahin'ity antoko ity o Ny fanahin'ity antoko ity
manomboka: Furmund o Goli Krumman
Nifarana: Sagorne Zanca Cresta o Karnik ilay mpahay tantara
Andiana fikatsahana kely izay hitondra anao hankafy ny Fetin'ny Ririnina, tsidiho fotsiny ny NPC mifanaraka amin'izany ary hahazo ilay fikatsahana ianao:
Ny fetin'ny Fetin'ny Ririnina o Ny fetin'ny Fetin'ny Ririnina
manomboka: Sagorne Zanca Cresta o Karnik ilay mpahay tantara
Nifarana: Baine Bloodhoof o Mpanjaka Magni Bronzebeard
vakio ny boky Ny fetin'ny Fetin'ny Ririnina, izay misy tantara fohy momba ny fankalazana sy ny loka valisoa miaraka amin'ny ankolafy.
Mandritra ny hetsika dia hahafahantsika manao zava-bita isan-karazany hahazoana ny lohateny hoe "Animal Party":
Mandrosoa, Metzen! Tehirizo i Metzen ilay renindry.
Metzen ny serfa
Ity zava-bita ity dia tratra amin'ny famitana ny iraka Midika inona izany! (kinova alliance). Tsidiho ny faritra "Misiona" raha mila fanazavana fanampiny.
tendan-kanina o tendan-kanina Atsipazo ny lanezy any Cairne Bloodhoof amin'ny fetin'ny ririnina. Eny, Atsipazo any amin'ny King Magni Bronzebeard mandritra ny fetin'ny lanezy ny lanezy.Fahombiazana tsotsotra, azonao atao ny mividy ny volom-panala amin'ny mpivarotra Change sy Copper izay hitanao amin'ny tanàna lehibe rehetra. Avy eo mitsidika an'i Cairne any Thunder Bluff na Magni ao Ironforge.
Ranomandry inona! Mandritra ny fetin'ny Fetin'ny Ririnina, anaovy a Tanan-dranomandry isaky ny hazakazaka / kilasy mitambatra etsy ambany:
Rogue tsy maty
Elf an'ny Warlock
Ny ampahan-dranomandry vitsivitsy dia azo raisina amin'ny fanorohana (/ fanorohana) ny Winter Revelers, izay ho hitanao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Azeroth.
Miaraka amin'ny fanampiana kely avy amin'ny namako Mahazoa famonoana mendrika 50 ho mpanampy kely amin'ny milina mahagaga.Mba hamitana an'ity zava-bita ity dia tsy maintsy ampiasaintsika ny milina Winter Wonder izay hitantsika ao amin'ny Stormwind, Ironforge, Exodar, Durotar, Tirisfal Glades, Silvermoon ary Dalaran ho tonga mpanampy kely ary amin'izany fomba izany no ahazoana olona 50 maty am-panajana, ny olan'ity Ny zava-bita dia ny endrika tsy mitohy aorian'ny fahafatesana, ka na manandrana ny tsy ho faty ianao na mila manao ady sasany.
Fahavetavetana tsotra izao Fenoy ny fikatsahana ny famerenana ireo fanomezana nangalarina tao amin'ny Smokywood Pastures ary raiso ny Misaotra anao avy amin'ny Smokywood Pastures.Mba hamitana an'ity zava-bita ity dia tokony hamarana ny rojon'ny misiona izay atomboka amin'ny Midika inona izany! (Kinova Alliance) izay misy ny famonoana olona Tsofy ny maharikoriko ary afaka Metzen ny Reindeer. Tsidiho ny faritra "Misiona" raha mila fanazavana fanampiny. Ao amin'ny 2011, ity iraka ity dia iraka ataon'ny vondrona isan'andro ary manome valisoa Fanomezana nangalarina, izay mety misy Vato arintany.
Ny Gourmet amin'ny Fetin'ny Ririnina Mandritra ny Fetiben'ny Ririnina dia ampiasao ny fahaizanao mahandro hamorona cookie mofomamy misy mofo mahandro, eggnog ary paoma.Raha mbola tsy nanomboka ny adinao ianao eo amin'ny tontolon'ny fandrahoan-tsakafo dia mila ataonao izany amin'ity vanim-potoana ity. Angamba ianao nampakatra lakozia tamin'ny hetsika Pilgrim. Misy fomba fahandro 3 ho an'ity hetsika ity ary amin'ny fanaovana azy ireo dia hahazo zava-bita matsiro ianao. Cookie mofomamy toy ny Eggnog ary ny Sakafo paoma mafana Izy ireo dia azo vidiana amin'ny mpivarotra ao amin'ny Smokywood Pastures ary anaovana akora tsotra be. Afa-tsy ny atody kely dia azo vidiana amin'ny mpividy ao amin'ny Smokywood Pastures ny akora hafa rehetra.
Rahalahy alohan'ny ho ho ho o Rahalahy alohan'ny ho ho ho Mampiasà mistletoe ao amin'i Horde na Alliance "brothers" mandritra ny Fetiben'ny Ririnina.Io zava-bita io dia niova tanteraka teo anelanelan'ny ankolafy roa. Ny vahoaka dia tsy maintsy mihaza ireto NPC manaraka ireto ary ampiasaina Mistletoe ao amin'izy ireo izay zavatra hafa mety ho azontsika raha mampiasa / manoroka amin'ny Winter Revelers isika:
Rahalahy Malach - Undercity
Durkot Rahalahy Wolf - Warsong manafintohina
Rahalahy Keltan - Satroboninahitry ny ranomandry
Ny fifanarahana, etsy ankilany, tsy maintsy mahita ireo NPC ireo ianao:
Rahalahy Nimetz - Stranglethorn Vega
Rahalahy Anton - Nijel Point
Rahalahy Wilhelm - Elwynn Forest
Rahalahy Karman - Theramore
Rahalahy Kristoff - Tafio-drivotra
Rahalahy Joshua - Tafio-drivotra
Rahalahy Cuerviz - Tafio-drivotra
Rahalahy Cassius - Tafio-drivotra
Rahalahy Benjamin - Tafio-drivotra
Ireo rohy etsy ambony dia misy sarintany hanampy anao hahita ireo NPC ireo. Na dia mora kokoa aza ny Horde, ny mpilalao ambaratonga ambany izay tsy afaka mizotra mora any Northrend dia hanana izany manta ary indrindra tsy ho vitan'ny mpilalao raha tsy misy ny fanitarana.
Ho fantatra raha ratsy ianao Rehefa misy dia sokafy eo ambanin'ny hazo Winter Festival ny iray amin'ireo fanomezana.Manomboka amin'ny 25 Desambra ka hatramin'ny 2 Janoary dia mijanona eo amin'ny hazo Ironforge na Orgrimmar hanokatra ny fanomezana Krismasy anao.
Meneito gilasy Mandritra ny Fetiben'ny Ririnina dia ataovy ny fitafianao feno amin'ny Fetiben'ny Ririnina mba hivadika snowman, avy eo mandihiza miaraka amin'ny snowman Dalaran iray hafa.Mba hahazoana ny Akanjo feno amin'ny Fetibe ririnina Tsy maintsy mamita ireo iraka manome anao ny zava-bita tsotra Abominable ianao, izay nohazavainay etsy ambony. Andro iray taty aoriana dia ho azonao amin'ny mailakao ny fonosana miaraka amin'ny akanjo, ankehitriny dia mijanona irery ny mitafy sy / mandihy any Dalaran miaraka amina snowman hafa toa anao.
Vanim-potoana izao (Torolàlana amin'ny antsipiriany)Mandritra ny Fetiben'ny Ririnina dia mitafiana akanjo ririnina telo ary mihinana Graccu Meatloaf Cake.Mba hamitana an'ity zava-bita ity dia tsy maintsy tadiavinao ireo akanjo telo ririnina, ho an'ny roa amin'izy ireo, araka ny efa nambarantsika, ny mpivarotra dia mivarotra ny lasany ary ireo akanjo efa novokarina dia hita ao amin'ny varotra. Kiraro ririnina y Akanjo ririnina maintso o Akanjo ririnina mena. Tsy maintsy mahazo koa ianao Satroka ririnina mena o Satroka ririnina maintso. Ny mena dia hita amin'ny famonoana ny Grand Magicien Telestra ao amin'ny Nexus na Shadowseeker Jedogas ao Ahn'Kahet. Manana azy ny maintso Tompon'ny Magic Urom amin'ny Oculus.
Ho an'ity zava-bita ity dia tsy maintsy miakanjo miaraka amin'ireo sombin'ny akanjo azontsika isika ary mihinana matsiro Salady hena sy voankazo Graccu, izay ho hitanao ao amin'ny Gift from Smokywood Pastures, rehefa vita ny rojo fitadiavana Fitsaboana amin'ny ririnina raibe (Kinova Alliance) na Midika inona izany! (Kinova Alliance).
Tra-la-la-la-Ogri'laFenoy ny iraka baomba indray! mitaingina renirano manidina mandritra ny Fetin'ny Ririnina.Mba hahatratrarana an'io zava-bita io dia tokony hamita ny iraka ianao, Baomba indray!, ao amin'ny Sky Guard Outpost, miorina amin'ny Blade's Edge Mountains, rehefa mitaingina ny Flying Reindeer mandritra ny Holiday Holiday. Mampalahelo fa tsy ho azon'ny rehetra izy ireo. Tokony ho ambaratonga 70 farafaharatsiny aloha ianao ary manana tendrombohitra manidina hahatratra ilay faritra. Avy eo ianao dia tsy maintsy nahavita ireo rojo fitadiavana hamaha ity fikatsahana isan'andro ity.
Ho hitantsika ny fomba hahatratrarana an'ity iraka ity raha mbola tsy nandia tongotra teo amin'ny sehatry ny Ogri'la ianao (izay mety fahita matetika). Amin'ny fotoana iray dia mila mpilalao 5 ianao fa mieritreritra aho fa tsy ela akory ianao dia hahita Death Knight vonona hanampy anao. Raha mikasa ny hahatratra ny zava-bita ianao, dia tsara kokoa raha mitady vondrona haingana araka izay azo atao ianao mba hanaovana ireo rojo hatrizay dia azo inoana fa efa nahavita azy ireo ny tsirairay ary tsy te hanampy anao:Manomboka ny rojom-pikarohana Ogri'la:Ny iraka izay manomboka ny rojo misiona dia Miresaka amin'ny ogre. Ity fikatsahana ity dia natolotry ny V'eru iray an'i Sha'tar hita eo afovoan'i Shattrath eo amin'ny mezzanine ambony.
Ny iraka manaraka dia Mog'dorg the Withered. Homeny andiana iraka ianao hamonoana ny 3 ny Zanakalahin'i Gruul. Tsy mila fanampiana ny famaranana azy ireo na dia atoro hevitra aza ny olona roa farafaharatsiny mba tsy hiparitaka be loatra.
Vantany vao vita amin'ny 3 Zanak'i Gruul izahay dia hanome antsika ny iraka Raharaha Grimoso.
Rehefa vita miaraka aminy isika dia hahazo ilay iraka Ao anatin'ny Grinder Soul Izany dia hanery antsika handrava zanaka iray hafa an'i Gruul, tsy misy na inona na inona hosoratana an-trano. Raha vantany vao vita ianao dia afaka manomboka manao asa fitoriana isan'andro any Ogri'la miaraka amin'ny iraky ny Ogres lanitra. Tsy maintsy manao ny iraka mandritra ny roa andro ianao hahazoana Ny fananganana ny relika aorian'izany dia afaka misafidy iraka vaovao roa ianao. Iray amin'izany Te-ho Skyguard Ranger ny zanakay lahy. Ilaina ny manao an'ity iraka ity, na dia mety ho somary sarotra aza izany dia ilaina tanteraka izany. Rehefa avy manana ny fonosantsika isika dia raiso ny iraka Ny tobin'ny Sky Guard.
Rehefa avy niresaka tamin'ny Komandà ianao, rehefa vita ny iraka dia hahazo ianao Mandeha ny baomba! fa tsy ity no iraka fanatontosana fa ny famitana izany dia hahafahantsika manatratra ny asa fitoriana.
Ataovy amin'ny alàlan'ny tendrombohitra niova anao ny iraka ary… Miarahaba anao! Manao veloma an'i Ogri'la.
Mba hanovana ny tendrombohitra dia mila kely ianao New holly o Canned holly izay ho azonao amin'ny fanipazana / fanorohana Winter Revelers.
Fiara mpamily Mandresy fifandonana 25 amin'ny fiara Shredder Race mandritra ny Fetibe amin'ny ririnina.Ity zava-bita ity dia mitaky ny fahazoana ny Controller fiara mihazakazaka shredder ny fanomezana azo manomboka amin'ny 25 Desambra. Mba hamenoana azy io dia mila mamono fiara mpamaky fiara mpamaky hafa amin'ny mpilalao hafa isika. Ny fifehezana azy dia mitovy amin'ny Milina fitotoana, miaraka amina talenta tokana: Voadona ny balafomanga fiara! Mameleza fiara hafaingan'ny mpilalao amin'ny alàlan'ity fahaiza-manao ity handrava azy ary hahazo fandresena amin'ny zava-bita. Azonao atao ny miady amin'ny fiara mihazakazaka marobe miaraka amin'ny fiara mpitaingina fiara iray isaky ny mbola tsy rava izy io, raha izany no iantsoantsika azy indray. (Raha tena liana amin'ny zava-bita ianao, dia mividiana Fanaraha-maso fiara milomano shredder de Jepetto Playreta ary miadia mba handresy koa!)
Rifle King o Rifle King Alefaso ireo mpitarika fahavalo voalaza etsy ambany.Fanamarihana: Ity zava-bita ity dia tsy voatery hofenoina Dia lavitra sy hafahafa iotoa azy Basy komana dia tsy hita raha tsy nandritra ny Fetiben'ny Ririnina 2009 nanampy hery lehibe Basy komana.
Ity zava-bita ity dia nampiana tamin'ny Fetiben'ny Ririnina 2009 ary azo atao amin'ny a Basy komana (nalaina tamin'ny fanomezana tamin'ny Fetibe Ririnina 2009). Tokony hampiasa ny fitaovam-piadiana hamelezana ny mpitarika ny ankolafy mpanohitra ianao. Soa ihany fa tsy ilaina io zava-bita io mba hamita ireo zava-bita hafa. Azonao atao koa ny mividy ny fitaovam-piadiana (ary koa ny bala tsy miankina aminy) Jepetto Playreta!
Hihira hira Krismasy o Hihira hira Krismasy Mitafia ny jumper amin'ny Fetiben'ny Ririnina mihira hihira hira Krismasy any an-drenivohitra mandritra ny fetin'ny Ririnina.Fanamarihana: Ity zava-bita ity dia tsy voatery hofenoina Dia lavitra sy hafahafa iotoa azy Akanjo akanjo mafana amin'ny Fetibe Ririnina Gaudy Tsy misy mandritra ny fetin'ny ririnina 2011, nampitombo hery iray Akanjo akanjo mafana amin'ny Fetibe Ririnina Gaudy.
Ity zava-bita ity dia tsy mitaky afa-tsy antsika ny fanamiana akanjo eo alohan'ny renivohitry ny fahavalo (vao vita mandritra ny fetin'ny ririnina). Azonao atao ny mandeha manidina any amin'ny tanàna ary mahita teboka tsy ahitan'ny mpiambina anao mba tsy hisarika ny saina sy ho afaka hanao ny zava-bita raha tsy misy fahasarotana be. Mazava ho azy fa tsy tokony nahavita ianao Misaotra fa tsy misaotra, raha tsy izany dia hanana a Karama feno vola fa tsy izany, akanjo ba «lamaody»!
Reveler o Reveler Fenoy ny zava-bitan'ny Fetiben'ny Ririnina voalaza etsy ambany.Ity zava-bita ity dia iray amin'ireo zava-bita lehibe indrindra eran-tany ary nomena ny famitana ny zava-bita rehetra voalaza etsy ambony ho an'io hetsika io. Ity zava-bita ity dia manome ny anaram-boninahitra "Animal Party" ary takiana amin'ny famitana ny zava-bita. Dia lavitra sy hafahafa io (Kinova Alliance), izay hamaly soa antsika Violet Proto-Drake.
Zava-bita kely tsy dia misy ifandraisany
Hihira hira Krismasy (Horde) na Hihira hira Krismasy (Alliance)
Rifle King (Horde) na Rifle King (Alliance)
Araka ny efa nolazainay taminareo teo aloha, ny 25 Desambra ka hatramin'ny 2 Janoary, be dia be ny fanomezana azo alaina ao amin'ny tanàna lehibe Orgrimmar sy Stormwind, miaraka amin'ireo hazo krismasy izay ho hita eo am-piandohan'ny renivohitra. Azontsika idirana hahazoana Fanomezana fetibe ririnina. Hisy fanomezana isan-karazany arakaraka ny iraka ataonao ary ireo zavatra samihafa azo atao dia ny:
Fanomezana nofonosina tamim-pitandremana fanomezana Ankehitriny nofonosina tamim-pitandremana –Loot–> Cookie Festival amin'ny ririnina, Ba kiraro volon'ondry mafana, Soja volom-borona mafana manga, Ba kiraro volon'ondry mafana o Akanjo faly Munchkin
Fanomezana mihozongozona kely fanomezana Fanomezana mihozongozona kely –Loot–> Hearthstation, Roastin'ny Fetin'ny Ririnina o Fetin'ny ririnina Eggnog
Fanomezana fety fanomezana Fanomezana fety –Loot–> Holiday Cheer Wand
Fanomezana avy amin'ny Fetin'ny Ririnina fanomezana Osbequio amin'ny Fetin'ny Ririnina–Loot–> Toy Gun Set/ Toy Gun Set
Fanomezana miaraka amina fonosana falifaly fanomezana Atolory amin'ny fonosana am-pifaliana –Loot–> Vata maitso mpanampy, Tinkerbell falifaly, Boaty mpanampy mena, Akanjo Snowman
Fanomezana izay manamarika ny tock fanomezana Present izay mahatonga ny Tic-Tac –Loot–> Canned holly, Volomaso mekanika, Skema: Snow Lord 9000, Formula: fitaovam-piadiana manintona - mety ho an'ny ririnina, Resipeo: Elixir an'ny hery fanala, Lamina: Akanjo maintso maitso o Volavola: sisin'ny ririnina
Ary izay ihany! Raha tsara ianao dia hahazo valisoa maro. Ny tena manamarika indrindra dia ny ahafahantsika mahazo tendrombohitra amin'ity hetsika ity sy biby fiompy maro. Inona no andrasanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Fetin'ny ririnina - Torolàlana nohavaozina 2018
Tafio ny fitafianao amin'ny fety - efa natomboka ny andro firavoravoana amin'ny Fetin'ny Ririnina!
Torolàlana hahazoana ny tendrombohitra Hive Mind